सीमामा कार्यरत प्रहरी जवान आइसोलेसनमा | Khash Khabar
गृह सीमामा कार्यरत प्रहरी जवान आइसोलेसनमा
सीमामा कार्यरत प्रहरी जवान आइसोलेसनमा
बैतडी । छिमेकी मुलुक भारतसंग सिमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाटमा कार्यरत एक प्रहरी जवानलाई आइसोलेसन भर्ना गरिएको छ । उनलाई ज्वरो, पखाला र टाउको दुख्ने समस्या देखिएपछि आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डा. वसन्तराज जोशीले जानकारी दिए । ३२ वर्षीय ती जवान सीमा नाकामा खटिएका हुनाले आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको हो डा. जोशीले बताए ।
जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा भर्ना गरिएका प्रहरी जवानको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको डा. जोशीको भनाई छ । प्रहरी जवानको थ्रोट स्वाबु संकलन गरेर परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी पठाईएको अस्पतालले जनाएको छ । यसअघि पनि जिल्ला अस्पताल बैतडीमा दुईजनालाई कोरोनाको आशंकामा आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको थियो ।
उनीहरुलाइ परीक्षण गर्दा नतिजा नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको थियो । बैतडी भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला भएकोले लकडाउनका बेला पनि अबैध रुपमा महाकाली नदीमा ट्युबमा तरेर आउन क्रम नरोकिदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दो छ ।